Ungatshintsha njani umntu ongcono?
Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba umntu udibana nawe kwaye ekugqibeleni uyagqiba isigqibo: yiyiphi intlungu. Akanelisekanga, angaqhelekanga, ahlambalaze, kwaye amahlaya akhe ayingqiqo. Kodwa ke ixesha lidlulayo kwaye ngokukhawuleza licaca ukuba ububele, ubuzwe, ukuqonda kubanjwa kuyo. Ngoku nje akafuni ukubonisa, ngenxa yezizathu ezithile ukukholelwa ukuba iimvakalelo ezintle kunye neemvakalelo ziphelelwa yintlungu kunye nosizi. Kubonakala ngathi iphupha lakhe elixabisekileyo kukuba ulahlekise iimvakalelo ngokubanzi, ukuba ube i-robot enobomi bakhe bujolise kuphela ekuwaneliseni iimfuno ezindala. Kodwa uyazi ukuba akayiyo loo mzobo kwaye akayi kuye yonke into, kodwa uyamkhathaza, kodwa uyala ukuqonda nokuyivuma.
Ungatshintsha njani umntu ongcono? Unokumnceda njani ukuba aqonde ukuba yonke into ephawulwe ngebala, kungeyomnyama? Ungamsindisa njani, kuye? Kufanelekile ngokukhawuleza ukuba kunzima ukulwa nabantu abanjalo. Bawagxeka abo abangafanelanga kwiingcamango zabo zobomi. Ndisazi ukuba ngumntu omhle. Ungakubiza ngelosi kwaye uphephe intlanganiso ngokuchanekileyo ngenxa yale nto. Unokumvuselela kuye iimvakalelo, kwaye unamandla kangangokuthi uya kuba noloyiko. Ukongeza, ngasemva kuye kukho abahlobo abahlala bethetha ukuba wenza konke okulungileyo. Kwaye, rhoqo, bacinga ngobuqotho ukuba oku kuya kuba ngcono. Abaqapheli ukuba umntu osondeleyo usele esecaleni kwinqaba, kwaye bayamxhoma ngezandla zabo. Ngoko ke, ukuba uyazi kakuhle abahlobo bakhe, zama ukuchazela ukuba akufanele uyenze kulo mfana enqwenela ukuba kubi. Ukuba awufuni, ke ungagxothi, kodwa ubuncinci ukuyeka ukudumisa.
Ukuze uqonde ukuba ungatshintsha njani umntu ongcono, kufuneka ukwazi izizathu zokuziphatha kwakhe. Abantu abalungileyo abaze bazame ukubonakala kungendawo. Kukho izizathu kwaye zifihliwe ebuntwaneni. Kwaye, kaninzi, kwintsapho.
Mhlawumbi loo mfana wayenomdla ongafuniyo. Kwenzeka xa abantwana behlala kwimindeni engumzali omnye, ngakumbi xa kungekho ntombi okanye unina. Kwaye nabazali baphila kwaye, ababanomdla kubantwana babo. Kule ntsapho, upapa, ngokuqhelekileyo, awaziwa ukuba kuphi, kunye nomama, uvela kanye ngonyaka, unikeza into kwaye iyalala. Buza le ntombazana, mhlawumbi wakhula kunye nogogo nomkhulu, kwaye wayengenalo uthando olwaneleyo lomama. Ngendlela, ukungabi nalokhu oku, kubonakala nangendlela yokuziphatha. Abantu abancinci banqwenela ukunyamezela nokumkela ngendlela enokuthi umququzelele ngokungathandabuzekiyo, njengomntwana omncinci, ukuba ahlasele intloko aze athi yonke into iya kulungiswa.
Ukuba kunjalo, zama ukufunda okuninzi malunga nobuntwaneni bakhe, ubudlelwane nezihlobo kunye nabahlobo. Ukuba iqabane lakho linengqondo engavamile kwaye lithanda ukuthetha ukuba njengomntwana wayenomdla kuphela kwiincwadi, qiniseka ukuba eqinisweni, wayemane ekhutshwe. Xa sisebuntwaneni, asiyazi ukuba uyayixabisa ingqondo kunye neengxaki. Ngako oko, mhlawumbi, iinkampani zentendelezo azizange ziyiqonde, ngoko ke wagqiba ekubeni ngumntu ongeyingozi, njengoMega-Brain, ukuzikhusela ekuthandeni.
Enyanisweni, abantu abanjalo bafuna uthando, ukuqonda kunye nobubele. Kodwa, bayayiphika, nangaphambi kwabo. Ngoko ke, kufuneka uchithe ixesha elininzi kunye nomgudu wokuqinisekisa umntu ukuba imbono yakhe ayilunganga kwaye ngokuvisisana naye uyenayo kwaye unokuphila.
Ukuzondla ngenye yezizathu ezibalulekileyo zokufuna ukungalungi. Akunandaba nokuba intombazana iyayivuma okanye iyayiphika, kodwa yona iyayizonda kwaye iyayijonga. Isizathu salokhu sinokubakho: ukungakhethi ngempumelelo kwi-yuyunivesithi, ukungabi nantuthuko ekuqhubeni umsebenzi, kungabonakali ukubukeka kunye nezinye. Unqwenela ukuvuma ukuba ukuba uyamthanda nazo zonke iigesi, ngoko kutheni engazithandi.
Ngenxa yesimo sengqondo esingalunganga kumntu, umntu onjalo akakholelwa ukuba ufuna umntu kulo mhlaba. Ngokuqhelekileyo, emva kwesigqubuthelo sobubi bobubi, umphefumlo onobucayi obufihlakeleyo, olula ukukhubekisa. Kukho iziphoso ezininzi, ngoko ke uyaxoshe abantu kude, ukuze kungabi namnye oya kumlimaza kwakhona.
Uya kufuneka wenze indlela ende kwigobolondo yakhe ukuze utshintshe lo mntu ukuba uphucule. Kuya kuthatha ngaphezu kwenyanga, ade aqonde ukuba uyamthanda "kungekho sizathu." Kumele wenze lo mntu uzithande, wenze ukuba ukholelwe kuye kwaye uzivulele. Kodwa iindlela ezinobundlobongela azifani apha. Simele senze ngokunyanisekileyo. Ungalokothi uthethe into ethile ngokungathi yinto engenakuphikiswa. Nangona ngokwenene kuyinyaniso. Mnike nje ukutya okucingayo, kwaye ungagxili, ufune, ngeendlela zonke, ukukhusela uluvo lwakho. Le ndlela iya kumgxeka, imenze inkani kwaye ibe yinto yokuzimela. Kufuneka uxelele iziganeko ezivela ebomini, kuthiwa, phakathi kwezinye izinto, khumbula iimbono kunye neentlobo zabantu abahlukeneyo, ngokubanzi, bathetha ntoni na ongaphula isimo sakhe sengqondo ngokungahambi kakuhle.
Musa ukumnyanzela lo mntu ukuba enze nantoni na. Ukuba uthembekile, uya kwenza konke ngenxa yobubele obungaphakathi. Kwaye kwakhona: ungatsho ukuthi ulungile. Akukho naphantsi kweemeko. Dumisa, inkxaso, kodwa ungasebenzisi igama elithi "ulungile". Abantu abanjalo baqonda la mazwi njengento yokuhlambalaza. Ulwa iminyaka emininzi ngenxa yesihloko esithi "umntu ogqithiseleyo kumhlaba", kwaye utshabalalisa lula zonke iziqhamo zemizamo yakhe. Xa utsho ukuba ulungile, ngakumbi uya kubonisa ukungabi nantoni. Ngaphandle kokungafuni ukwenza oku, nokuba wazi ukuba kuya kunceda kakhulu, uya kufikelela ekupheleni. Ukunyaniseka kwakhe kunye nokunyaniseka kwakho ekugwebeni kuya kubangela ukuxabana kunye nentukuthelo. Ngoko, yenza sengathi uyavuma, kwaye uyamkholisa. Ngengqiqo, ngokungaqondakaliyo, yenza konke ukukwenza ukuba akhumbule ububele bakhe aze ayeke ukwesaba.
Jonga umfana wakho ngothando nangokunyamekela. Musa nje ukugqithisa intonga kwaye ungadlala indima yomama. Yenza yonke into ngokulinganisela, kodwa ukuze ive ukuba umntu ufuna umntu, ukuba uyathandwa kwaye uyahlonishwa. Nangona uya kulwa nayo yonke into, ngokukhawuleza udonga luya kuqubuka kwaye i-mask iyawa. Kwaye, ngelo xesha, ekugqibeleni uyakwazi ukubonisa wonke umntu oko wakubonayo emphefumlweni wakhe kwaye uyavuma ukuba ulungile.
Ungaqonda njani ukuba lo mntu unenjongo enzulu?
Izinto ezi-3 ezingenakuze ziphele
Ukuba indoda ayivumeli ukuthenga izinto ezintsha
Indlela yokugcina umntu-Leo
Indoda enhle kunazo zonke kwi-Intanethi
Yintoni abantu abamoyikayo ebhedini
Ingxaki enzima yeVien Leigh
Burrito kunye neembotyi
Ukuqala kwempunga: zokupheka kwabantu
Idizayini yangaphakathi yendawo yokudlela
"IGreen Gramophone 2015": iixesha ezigqamile
I-Compote yama-apricots omisiwe
I-conjunctivitis ye-allergen, i-antihistamines
Ukulahla kunye nendlela yokulwa nayo
I-pie ne-cream cream
Imfundo yabantwana kumazwe ahlukeneyo
Ijumpu le jam nge-orange
Ukhathazeka, ukulahlekelwa ngamandla
Kindergarten. Ukuqhuba okanye ukungaqhubi?